Football Khabar » बार्सिलोनालाई भ्यालेन्सियाका कप्तानको यस्तो चेतावनी !
बार्सिलोनालाई भ्यालेन्सियाका कप्तानको यस्तो चेतावनी !
स्पेनिस कोपा डेल रे फुटबलमा आज राति बार्सिलोना र भ्यालेन्सिया खेल्दैछन् । ला लिगाको च्याम्पियन टोली र चौथो स्थानको टोली उपाधिका लागि भिड्न लागेका हुन् ।
सो खेलअघि भ्यालेन्सियाका कप्तानले बार्सिलोनासँगको खेलबारे धारणा राखेका छन् । खेलअघिको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ड्यानी पारेजोले यो खेल दुवै टिमका लागि लागि सहज नहुने भन्दै बार्सिलोनालाई चेतावनी दिएका छन् । उनले बार्सिलोनासँग स्टार खेलाडी भएको उल्लेख गर्दै आफूहरू हेभिवेट टिमसँग उपाधिका लागि लड्ने बताए ।
पारेजोले बताएका छन् कि, बार्सिलोना च्याम्पियन्स लिगमा लिभरपुलसँगको हारपछि राहतको खोजीमा छ । यस्तो बेला उनीहरू अझ बढी खतरनाक हुन सक्छन् । ‘बार्सिलोनाले लिभरपुलसँग जुन हार भोग्यो, त्यसबाट उनीहरू निकै पीडामा छन् । तर, अब उनीहरूसँग जित र उपाधिको नयाँ भोक छ,’ पारेजोले भने, ‘हामीलाई थाहा छ, हामी कठिन खेल खेल्न गइरहेका छौं ।’
पारेजोले आफूहरू बिनादबाब खेल्ने बताए । ‘बार्सिलोनालाई यो उपाधि निकै महत्त्वपूर्ण छ । तर, हामीलाई उसको जति दबाब छैन । तसर्थ, हामी बिनादबाब खेल्नेछौं,’ पारेजोले भने, ‘बिनादबाब खेल्न सजिलो हुन्छ ।’
पारेजोले बार्सिलोनासँग मेस्सीजस्ता उत्कृष्ट खेलाडी रहेको उल्लेख गर्दै आफूहरू सचेत रहेको बताए । ‘हामी हरेक तवरले सचेत छौं । यो खेल कठिन हुनेवाला छ । तर, बार्सिलोना सधैं जित्ने टिम होइन,’ उनीहरूसँग कसरी खेल्नुपर्छ, हामीलाई थाहा छ ।’
भर्खरै सकिएको ला लिगामा बार्सिलोनाले यो सिजन भ्यालेन्सियालाई हराउन सकेको छैन । लिगको पहिलो खेलमा भ्यालेन्सियाले आफ्नो घरमा १–१ को बराबरी खेलेको थियो भने दोस्रो खेल बार्सिलोनाको घरमा पनि २–२ को बराबरी खेलेको थियो ।
प्रकाशित मिति ११ जेष्ठ २०७६, शनिबार ११:५८